You are at:Home»विश्व»एसियन सागरमा शक्तिशाली भूकम्प, हल्लियो टर्की
By bktnews Posted on	 October 31, 2020 विश्व
काठमाडौं। शुक्रबार एसियन सागरमा आएको शक्तिशाली भूकम्पले टर्की र युनानलाई हल्लाइदिएको छ। टर्कीका गृहमन्त्रीका अनुसार पश्चिमी इजमिर प्रान्तमा भूकम्पले ६ वटा भवन ढलेको छ। टर्की सरकारले भूकम्पको केन्द्र एसियन सागरको १६. ५ किलोमिटर मुनि रहेको बताएको छ।
सो भूकम्प ६. ६ रेक्टरस्केलको थियो। यसले एसियन सागरमा सुनामी आउने खतरा बढेको छ। युरोपीय-भू-मध्यसागर भूकम्प विज्ञान केन्द्रले सुरुमा उक्त भूकम्पको तीव्रता ६. ९ थियो र त्यसको केन्द्र उत्तरपूर्वस्थित सामोस द्विपमा थियो।
टर्कीका सञ्चारमाध्यमहरुले मध्य इजमिरमा बहुतल्ले भवन हल्लिएको दृश्य देखाएका थिए। सुरक्षाकर्मी खटिएको पनि समाचारमा देखाइएको थियो। मध्य इजमिरका कतिपय स्थानबाट धुवाँ उडिरहेको देखिएको थियो।
इजमिरका अधिकारीहरुले भूकम्पबाट भएको हानिनोक्सानीबारे अहिले नै केही बताउन नसकिने जानकारी दिएका छन्। टर्कीका मिडियाका अनुसार भूकम्प एसियन तथा मरमरा दुवै क्षेत्रमा महसुस गरिएको छ, यो क्षेत्रमा इस्तानबुल पर्छ।
इस्तानबुलका अधिकारीहरुले पनि भूकम्पबाट हुन गएको क्षतिबारे बताउन सकिरहेका छैनन्। अमेरिकाको भूगर्भ सर्वेक्षणले भने भूकम्पको तीव्रता ७.० रहेको बताएको छ।
भूकम्पको झड्का पूर्वी युनानका प्रायद्विपमा पनि महसुस गरिएको थियो। साथै, राजधानी एथेन्सका मानिसहरु घरबाट निस्किएर भागेका थिए। पहाडबाट चट्टान खसिरहेको पनि बताइएको छ। एजेन्सी